Karim Benzema oo aaminsan in Ronaldo uu ka fiican yahay Zidane… (Maxay tahay sababtu?) – Gool FM
(Madrid) 30 Mar 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Karim Benzema ayaa sheegay in halyeeyga reer Brazil ee Ronaldo uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican isaga ahaan, kaddib markii uu tilmaamay inuu sabab buuxda u ahaa jaceylka uu u qaaday kubadda cagta markii uu yaraa.
Karim Benzema iyo halyeeyga reer Brazil ee Ronaldo ayaa waxay qaab muuqaal ahaan ugu wada sheekeysteen baraha bulshada gaar ahaan “Instagram-ka” wuxuuna Karim u sheegay halyeeyga reer Brazil.
“Waxaan joogaa Madrid, qoysku waa fiican yahay, laakiin karantiil baa na dilaya”.
“Waxaan u sheegi jiray taageerayaasheyda inaan jeclahay kubbadda cagta markii aan kugu arkay TV-ga, aniga ahaan waxaad tahay kan ugu fiican abid.”
“Waxay sidoo kale i weydiiyeen Zidane laakiin waxaan u sheegay inaad adigu tahay kan ugu wanaagsan.”
Si kastaba ha noqtee, halyeeyada Ronaldo iyo Zidane ayaa waxay si wadajir ah uga soo wada ciyaareen kooxda Real Madrid inta u dhaxeysay 2002 ilaa iyo 2006, waxayna kula guuleyteen Los Blancos horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii 2002.2003 iyo Copa del Rey oo ahaa 2003.